Anchor nyora zvinoreva | Kunyora
Anchor tattoos zvinoreva
Kana paine chinyorwa chine zvirevo zvakawanda kune uyo anozvinyora, zviri pasina mubvunzo iyo anchor tattoo. Iyi tattoo yakakosha kune vese vakadzi nevarume uye dhizaini, ruvara uye nenzvimbo kwaunoda kuwana iyi chiratidzo tattoo inoenderana nezvako zvaunofarira. Kune akawanda magadzirirwo aripo uye zvinoenderana nezvinodiwa zvako uye zvaunofarira zvaunosarudza imwe kana imwe dhizaini.
Anchor maTattoo anogona zvakare kusiyanisa mune zvazvinoreva zvichienderana nezvaunoda kuratidza netatoo kana zvichienderana nezvinoreva chinotsigiswa kwauri zvakare. Anchor inogona kureva kwauri kuyeuka kwemunhu kana vaine anchor yakatemwa, Zvinogona kureva chimwe chinhu chakakosha kwauri kana iwe ungangoda kureva icho chaicho chaicho.
Mumakungwa asina kugadzikana, anchor inogona kunge iri yekuvanda yekupedzisira yechikepe, ndiyo tariro yekuti zvinhu zvinogona kuita zvirinani. Anchor tattoo inogona kuva nezvakasiyana zvinoreva, zvese zvine hunhu hwevafambisi vechikepe uye izvo zvinogona kunzwikwa muhupenyu hwezuva nezuva. Zvimwe zvezvirevo izvi zvaunogona kuda kana kuita kuti unzwe kubatana kwakabatana neichi chinhu ndeizvi:
Kuzvipira kune zvakanakira kunaka
Kugadzikana uye chengetedzo
Kunyangwe kuvepo kwechisungo mumatanho ekunyora kunowanzoreva kugadzikana uye kuvimbika, nekubatanidza zvinhu zvakasiyana siyana mukugadzirwa kwako, unogona kushandura zvinorehwa netatoo yako sechiratidzo chekuvimbika kune imwe tsika kana sangano. Izvo zvinogona zvakare kusiyanisa zvichienderana nezvaunoda chirevo kuti chiburitse zvinoenderana nemamiriro ako ehupenyu kana icho chinotsigiswa chinogona kureva kwauri.
Kana iwe uine anchor tattoo uye uchida kutitumira isu pikicha kana kutiudza isu kuti iyo tattoo inorevei kwauri, usazeze!
1 Mhando dzeanchor tattoos
1.1 Kune vakaroorana
1.3 Mbambo diki
1.4 Anchor uye chidzoreso
2 Nzvimbo dzekuwana anchor tattoo
Mhando dzeanchor tattoos
Ichokwadi kuti anchor maTattoo anogona kuve nemhando dzakasiyana dzeanoreva, nekuti iwo asina kumisikidzwa pane yakatarwa. Asi kana isu tichitaura nezvematattoo evakaroorana uye kugovana zvakajairika, saka unofanirwa kupa pekutanga kune yakatarwa. Imwe iyo inomiririra simba uye kukwezva. Nekuti kana iwe uri murudo iwe unoda kuve neuyo mudiwa padivi pako uye woita hukama hwakasimba hunogara. Chinhu chinenge chiri iro chaizvo basa rembambo, kuchengetedza igwa rakachengeteka, padyo uye risingazungunuke.
Zviri pachena kwatiri kuti iyo minimalist pfungwa inogona zvakare kuwanikwa pakati peanchor tattoos. Pfungwa inotitungamira kuti titaure nezve yakashongedzwa uye yakapusa dhizaini. Kuti ivo havadi zvimwe zvinowedzerwa kuti vakwanise kubudirira uye kutipa isu tese mucherechedzo watinoda. Iyo minimalist nyora vanotaura mudiki saizi simba rese uye kugadzikana kwavasingade kupfuudza. Ivo vanogona zvakare kusungirirwa zvakakwana kune chero chikamu chemuviri uye chekare, unogona kuvaperekedza pamwe nekuwedzera sekunge moyo diki. Haisi iyo pfungwa huru here?
Kunyangwe sezvatataura, vanogara vachitaridzika zvakanaka, zvimiso zvidiki ivo kazhinji imwe sarudzo yemuviri wese. Nekuti kuve nehukuru hushoma, chero chikamu cheganda chichafara kuigamuchira. Ndokusaka netatoo yehukuru uhwu tinokwanisa zvakare kuratidza hukuru hwekufananidzira. Kunyangwe chiri chokwadi kuti mhando idzi dzekugadzira dzinowanzo kuwanikwa munzvimbo dzakakosha senge makumbo kana mawoko.
Anchor uye chidzoreso
Kubatana kweanchor uye yekudzora zvakare imwe yeanodikanwa magadzirirwo evakaroorana. Kunyangwe pamwe zvisiri zvevose, hongu kune vazhinji vazhinji. Nechikonzero chei? Zvakanaka, nekuti chidzoreso chinoratidza munhu anowanzo tungamira vaviri ava kana ndiye musoro unofunga. Kune rimwe divi, anchor ndiani inomiririra rutsigiro rwevaviri ava uyezve kuchengetedzeka kana kuvimbika. Ndokunge, zvese zvinowirirana, kunyangwe zvakasiyana zvimwe zvingangoreva zvakapinza.
Tsika yechinyakare yekuAmerican yakachengetedzwa nanhasi. Iwo mavara akashinga uye marine-themed dhizaini ndidzo dzaive tsika dzezuva iri. Kunyangwe chiri chokwadi kuti nhasi tinogona kuona nyora nyowani dzakashandurwa, isu tinoramba tichigara neruzivo rwegungwa. Neichi chikonzero, kana isu tichitaura pamusoro pehupamhi nyora, hazvingadziviriki kuti isu tifunge nezve yakanyanya mavara dhizaini, iyo gobvu mitsara uye ruzivo rwunovaperekedza.
Iyo ndeimwe yemashoko akazara zvakanyanya kana tichitaura nezvematatoo ane anchor. Maruva, pamusoro pekumiririra runako, zvakare zvakafanana nerudo. Saka zvinoreva izvi zvinowedzera mukugadzikana uye kuchengetedzeka kwechisimiso. Tichaona maratidziro aanotipa isu neakateedzana maruva, muvara rizere, ayo anombundira anchor iri mubvunzo.
Kana isu tichida kunongedzera kune mudiwa, hapana chakafanana nekuisa zita ravo pane yega tatoo. Mune ino kesi, kana tikataura nezve zvinoreva tichazviita senge iyo trust chiratidzo, zverudo nekusingaperi. Ndokusaka mazita evanhu vakafa zvakare vari protagonists. Rudzi rwemubatanidzwa wekusingaperi kune vanhu vatinoda.
Kufanana nechinhu chinotsigisa, kambasi ndechimwe chezvinhu zvakakosha pakati pevafambi. Mune ino kesi isu takatarisana nesarudzo inotipa iyo protection zvinoreva. Rumwe rubatsiro rwunoratidza nzira yakanakisa yekudzoka, zvichienzaniswa nekugadzikana kweiyo anchor. Imwe yemabatanidzwa akakwana kupfeka mu tattoo.
Kunyange zvazvo mapuruguru zvakare inomirira rusunungukoMune ino kesi, uye nekuenda pamwechete nechisungo, isu tinosara neicho chiratidzo chekuchinja. Pasina kukanganwa kuti runako richavawo chimwe chezvinoreva izvi. Icho zvakare mucherechedzo wekuvimba, saka zvinotibvumidza kuratidza anokwezva magadzirirwo muinki dema kana akazara mavara apedza.
Nzvimbo dzekuwana anchor tattoo
Pasina kupokana, zvigunwe zvinogara zviri imwe yemazano makuru e pfeka nyora. Kunyanya kana isu tichida kupfeka chimwe chinhu chakangwara. Iwo anchor anogona kuoneka ese ari pasi peiyo minwe, semaringi, uye padivi peminwe. Dhizaini kune wese munhu anotakura zvakafanana chiratidzo icho isu tanga tichitaura nezvacho.
Chimwe chei zvikamu zvinonyanya kudiwa zvemuviri itsoka. Kunyangwe chiri chokwadi kuti kune vakawanda inzvimbo inorwadza kana zvasvika pakutora nyora, vamwe havazvipokane. Nekuti zvakare tiri kutaura nezvenzvimbo yakangwara, yematoto ari nyore. Mune ino kesi, avo vane minimalist yakatemwa vanowanzo kuwanda, asi ichokwadi kuti munhu wega wega anogona kuumba kune kwavo kufarira.
Kunyangwe iri mhando yetattoo ine mavambo egungwa, vaive zvakare vakaisa iwo magadzirirwo pachikamu chemaoko. Dzimwe nguva, muchikamu chavo chepamusoro, asi mune mamwe akawanda vaipfeka anchor maTatoo paruoko. Mune ino kesi, saizi inowanzo kuve yakati kurei, izere nemavara kana dhizaini muinki nhema asi ichibatanidzwa nemamwe madata.
Yekupedzisira kana yekumashure nzvimbo yemutsipa zvikamu zviviri zvezvikamu zve pfeka mhando iyi yematatoo. Zvakawanda uye zvakagadzirwa zvirikuonekwa uye mune ino kesi, zvakajairika kuti ivo zvakare vane yepakati kana diki saizi. Kunyanya kana iwe uchinge usina kana ma tattoo munzvimbo iyi.
Mifananidzo: Pinterest, tattoo.bestpins.fun, www.tattooeasily.com, tattoo.tzcnapps.com, archzine.es
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Mhando dzematatoo » Anchor tattoos zvinoreva
Unganidzo ye sloth tattoos, mienzaniso uye mazano
Zvinoreva nyuchi nyora